Shaqaale ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda ee Maamulka Ximan iyo Xeeb oo tababar loo furay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Shaqaale ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda ee Maamulka Ximan iyo Xeeb oo tababar loo furay “SAWIRRO”
Madaxwaynaha maamulka Ximan iyo Xeeb C/laahi Cali Maxamed ayaa tababar socon doono muddo shan cisho ah waxa uu maanta u furay ilaa 20-ka mid ah shaqaalaha Wasaaradda Maaliyadda maamulkaasi.
Shaqaalaha ayaa tababarkan ku qaadan doona casharo ku aadan hanaanka canshuuraadka, koboca dhaqaalaha iyo sidii ay qaybohooda kala duwan isula shaqayn lahaayeen.
C/laahi C/raxmaan Tootoole Guddoomiyaha degmada Cadaado oo furitaanka tababarkan ka soo qayb galay ayaa sheegay in ka degmo ahaan uu muhiim u yahay in shaqaalahan la baro habka maareynta canshuuraha.
Waxa sidoo kale halkaas ka hadlay Agaasimaha Wasaaradda Maaliyadda ee maamulka Ximan iyo Xeeb C/laahi Cumar Maxamuud, isaoo sheegay in tababarkan uu shaqaalaha fursad u siin doono inay awood u yeeshaan maareeynta xafiisyadooda iyo qaadista canshuuraha.
Madaxwaynaha Maamulka Ximan iyo Xeeb C/laahi Cali Maxamed ayaa isna hadal dardaaran ah u jeediyay shaqaalaha tababarkan ka faa’iideysanaya, waxaana uu sheegay in tababarkan uu qayb ka yahay dadaal la doonayo in shaqaalaha maamulka lagu dhiso kartidooda, si waxqabadkoodu u noqdo mid waxtar leh.
Wasiirka Xanaanada Xoolaha oo shir caalami ah uga qeyb galay dalka Ivory Coast “SAWIRRO”